Ogaden News Agency (ONA) – Xerada Xagardheer oo shir aad u mihiim ah ay isugu yimaadeen odayaash iyo indheergaradka deegaanka Faafi iyo Shabeele
Xerada Xagardheer oo shir aad u mihiim ah ay isugu yimaadeen odayaash iyo indheergaradka deegaanka Faafi iyo Shabeele
Posted by ONA Admin	/ November 19, 2013
Waxaa xerada Xagardheere lagu qabtay shir aad ubalaadhan oo ay kasoo qayb galeen dad badan oo meelo kala duwan isaga kala yimid.
Shirkan oo ay soo abaabuleen dhaliyaro katirsan jaaliyada S.ogadenia ee ku dhaqan xeryaha Dhadhaab ayaa waxaa kasoo qayb galay odayaal, ugaasyo, aqoonyahano, dhalinyaro, culimo-owdiin iyo wax garad kale. Guud ahaan dadka kasoo qaybgalay shirka ayaa ahaa Gobolka Shabeelle ee Ogadenya iyo deegaanka Faafi ee hoostaga dagmada Gaarisa.
Dadkii goobta isugu yimad ayaa ugu horaynba waxay howshooda ku furteen aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah ka dibna waxaa laguda galay ajandayaashii shirka oo aad u mugwaynaa. Kala warqaadasho iyo iswaraysi kadib waxaa goobta khudbado dhaadheer kasoo jeediyay mas’uuliyiintii iyo odayaashii shirka hagayay waxaa falanqayn iyo lafa gur badan lagu sameeyay marxalada uu halganka hubaysan ee lagu xoraynayo Ogadenia marayo oo la isla qiray in uu meel aad usaraysa marayo ayna tahay in sibuuxda loo taageero, iyadoo wax garadkii iyo aqoonyahankii madasha shirka fadhiyay ay guud ahaanba isku raaceen in ay muhiimtahay dardar galinta iyo horomarinta halganka kasocda dhulka Ogadenia ee ay caynaanka uhayso JWXO kaas oo ay kusheegeen in ay wax yar uga dhimantahay xoriyadii lagu taamayay waxayna sheegeen in a hiil iyo hooba lagarabtaagan yihiin howshan socota ee lagu hananayo ciida ogadenia.
Guntii iyo gabogabadii odayaashii, aqoonyahankii iyo wax garadkii ayaa canbaareeyay falalka foosha xun ee ay ciidamada Itoobiya kawadaan dhulka ogadenia iyo fikirka dhulbalaadhsiga ku salaysan ee Itoobiya waxayna odayaashu kubaaqeen in laga hortago barnaamijyada cusub ee uu gumaysigu kuboobayo khayraadkii ogadenia iyo beeraha ladoonayo in lasiiyo dad itoobiyaan ah.